कांग्रेस छोडेका सुरेन्द्र चौधरी भन्छन् : घर छोडेपनि डेरा खोज्दै हिँडेको छैन
गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्ताकांग्रेस छोडेका सुरेन्द्र चौधरी भन्छन् : घर छोडेपनि डेरा खोज्दै हिँडेको छैन
Tuesday, 19 April 2016 16:11	Rate this item
पर्साबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सुरेन्द्र चौधरी पूर्वमन्त्री, नेपाली कांग्रेस पर्साका पूर्व सभापति, पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन्। वौद्धिक र इमान्दार छवि बनाएका चौधरीले कांग्रेस महाधिवेशनअघि पार्टीबाट राजिनामा दिएपछि चर्चामा छन्। पार्टीमा राजिनामा दिएपनि उनी कांग्रेस संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा सहभागी भए।
चार पटक सांसद निर्वाचित भएका र पटक पटक मन्त्री भइसकेका चौधरी अहिलेको राजनीतिक दलहरुबाट मुलुकको विकास हुन नसक्ने भन्दै वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनले गरेका निर्णय, आगामी योजना र उनीमाथि लागेका आरोपहरुका विषयमा विनोद ढकाल र रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानी :
कांग्रेस महाधिवेशनअघि तपाइँले पार्टी छाडेको घोषणा गर्नुभयो, तर संसदीय दलको निर्वाचनमा मतदान गर्न जानुभयो। यसबाट तपाइँले पार्टी छाडेको हो कि होइन अन्यौल भयो नि।
मेरो कांग्रेसका नेताहरुको काम गर्ने शैलीसँग म सहमत छैन। सिटौलाजी, रामचन्द्रजी, शेरबहादुरजी सबैको काम गर्ने शैलीप्रति मेरो विमति छ। कांग्रेसका अहिलेका नेताहरु प्रोग्रेसिभ भएनन्। मेरो बुझाइमा अहिलेका नेता भन्दा त पुराना नेताहरु धेरै प्रोग्रेसिभ हुनुहुन्थ्यो। विपी त एक शताब्दी अघि नै धेरै प्रोग्रेसिभ हुनुहुन्थ्यो। गिरिजाबाबु प्रोगेसिभ हुनुहुन्थ्यो, गणेशमानजी, किसुनजी पनि प्रोग्रेसिभ हुनुहुन्थ्यो। यी दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको चरित्र त पञ्चायतका नेता भन्दा पनि गएगुज्रेको छ। त्यसैले अहिलेको व्यवस्था राजतन्त्रविनाको पञ्चायत (पञ्चायत रेजिम विदआउट मोनार्की) जस्तो भएको छ।
यहाँ क्षमता भन्दा पनि चाकडी चाप्लुसी र स्तुतिगानको राजनीति भयो। म आठ वर्ष जेल बसेको छु राम्रो डिग्री पनि गरेको छु तर कुनै कमिटीमा नराख्ने। सुरेन्द्र चौधरी क्रिटिकल छ भनेर सिरियस किमिटीमा जिम्मेवारी नदिने। समाजका हरेक विषयमा नसोच्ने, सबैलाई समेट्न नसक्ने तर दुई चार जना भरौटेलाई मात्र लिएर हिड्ने। यिनै कारणहरुले मैले पार्टीबाट राजिनामा दिएको हुँ, तर स्वीकृत भएको छैन। मेरो मनभित्र कांग्रेसबाट डिट्याचमेन्टको प्रोसेस सुरु भइसकेको छ।
केन्द्रीय सदस्य र पटक पटक मन्त्री भइसक्नुभएको तपाइँ अहिले किन पार्टी छोड्न लाग्नुभयो?
मेरो थर्ट प्रोसेसमा लामो समयदेखि के कुरा थियो भने वैकल्पिक शक्ति नभएका कारण कांग्रेस र एमाले पार्टी मात्तिएका छन्। यिनिहरु यति मात्तिए कि जनताको चाहना नबुझ्ने र बुझ्न नखोज्ने भए। एमाओवादी त लुटेरा पार्टी नै भइहाल्यो। एउटा आइडियालिस्टिक पार्टी नभएकै कारण यी पार्टीहरु मात्तिएका हुन्।
म गिरिजाबाबुको पालामा तीनपटक मन्त्री भएँ। उहाँले मलाई अहम जिम्मेवारी पनि दिनुभयो, किनभने उहाँले मलाई चिन्नुभएको थियो। किसुनजीले पनि मलाई माया गर्नुभयो। तर अहिलेका नेताहरुले चिनेनन्। एउटै नेतालाई मात्र विश्वास गरे। तीस वर्षसम्म एउटै अर्थमन्त्री, यस्तो पनि डेमोक्रेसी हुन्छ? नेहरुजस्तो व्यक्तिले ६ पटक अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्नुभयो। तर हाम्रोमा एउटै मान्छेलाई ३० वर्षसम्म अर्थ मन्त्री बनाइयो। अर्थ मन्त्रालय रामशरणको, गृहमन्त्री खुमबहादुरको, परराष्ट्र चक्र बाँस्तोलाको ठेक्काजस्तो भयो।
नेपालका नेताहरुको ल्याकत क्षमता र हैसियत नभएका कारण जनाताले दुःख पाइरहेका छन्। अहिले नाकाबन्दीमा भारतलाई दोष दिइयो। पेट्रोल त भारतले नदिएर अभाव भयो नेपाली जनताले खानेपानी नपाएको कसको कारणले हो? नेपाली जनताले विजुली किन पाएनन्। नदीनाला छ तर सिंचाई छैन। नेपाली जनताले दुःख पाउनुको कारण नेताहरु हुन्। त्यसैले एउटा वैकल्पिक शक्ति चाहिएको छ।
कस्तो वैकल्पिक शक्ति? डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्तिजस्तै हो?
नेपालको राजनीतिका लागि एउटा वैकल्पिक शक्ति आवश्यक छ। त्यसका लागि सच्चा नेता चाहिएको छ। मेरो बाबुरामजीसँग कुराकानी भएको छ। मैले उहाँलाई भनेको छु म नेता बन्ने तलतल लागेर हिँडेको होइन। म त गणेशमानजी झै नेता खोज्न निस्किएको छु। जसरी गणेशमानजी जेलबाट भागेर विपी खोज्न सफल हुनुभयो म त्यसरी नै नेता खोजिरहेको छु।
उहाँले डिल्लीरमण रेग्मीलाई पनि भेट्नुभयो, देशको नेता होइनन् भनेर छोड्नुभयो। टंकप्रसाद आचार्यलाई पनि भेट्नुभयो त्यागको प्रतिमुर्ति पनि हुन् क्रान्तिकारी पनि हुन्। तर देशको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् त्यसकारण मैले उहाँलाई छोडेँ भन्नुभयो। जब बीपीलाई भेट्नुभयो त्यसपछि दंग परेर बल्ल मैले खोजेको नेता भेटेँ भन्नुभयो। म पनि त्यसरी नै गणेशमानजीले विपी खोजे झै नेता खोज्न निस्किएको छु। देशको भविस्य देख्ने इमान्दार, क्षमताशील व्यक्तिको खोजीमा निस्किएको छु।
तपाइँ बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमा जानुहुन्छ कि हुन्न?
म बाबुरामजीसँग जान्न। यदि एउटा अर्कै शक्ति निर्माण हुन्छ र त्यसमा बाबुरामजी पनि आउनुहुन्छ भने मेरो कुनै आपत्ति छैन। धेरै नेताहरुले सटर खोले त्यसैले हामी पनि मिलेर एउटा सटर खोलौं, त्यस्तो मानसिकता राख्ने म हैन। सटर खोल्ने भनेको सपकिपर मोडालिटी हो, म सपकिपर मोडालिटीमा विश्वास गर्दिन।
मैले बाबुरामजीसँग भनेको छु, तपाईले नेपाली जनतालाई दुईवटा कुराको जवाफ दिनुपर्‍यो। पहिलो नेपालमा जे जति नरसंहार भयो त्यसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्र दोषी हुनुहुन्न, तपाई पनि बराबर जवाफदेही हुनुपर्छ।
दोस्रो तपाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति बन्नुभयो। त्यो बेलामा तपाईको धेरै कुरामा रोल प्ले हुन सक्थ्यो। तर तपाई हेरेर बस्नुभयो। कुनै भूमिका निर्वाह गर्नुभएन। रेकर्ड किपरको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसबेला जे जे भयो त्यस्मा हस्ताक्षर गर्नुभयो। अनि घोषणा भइसकेपछि बाहिर आएर यो संविधान दिपावली गर्न लायक छैन। यसले मधेसी आदिवासी जनजातिको समस्या समाधान गर्दैन भन्दै हिँड्नुभयो।
त्यसैले तपाईलाई नेपाली जनताले त्यति सजिलै विश्वास गर्दैनन्। तपाईको अगाडिकै पृष्ठभूमि पनि छ, त्यही पृष्ठभूमिबाट नेपाली जनताले हेर्छन्। तर तपाई नयाँ अवतारमा आउन खोज्नुभएको हो भने अन्य फोर्सहरुलाई पनि साथ लिनुस् त्यसबेला एउटा फोर्सका रुपमा मेरो पनि सहभागिता हुन्छ।
त्यसोभए के मधेस केन्द्रित कुनै पार्टीमा जानुहुन्छ?
मैले उपेन्द्रजीसँग पनि कुरा गरेँ, हृदयशजीसँग कुराकानी भयो, राजेन्द्र महतो जीसँग पनि कुरा भयो। हुन त यो थारुको छोराले ठूलठूला कुरा गर्छ भन्नुहोला। मेरो त्यति ठूलो प्रोफाइल पनि छैन। तर मेरो साथमा मधेसी चौधरी मात्र हैन दाहाल, आचार्य, ढकाल जस्ता टाइटल भएका बाहुन क्षेत्री पनि छन्।
तपाईले जुन दिन पार्टी छोड्नुहुन्छ म त्यही दिनबाट छोड्छु तर राष्ट्रिय राजनीति गर्नुहोला भनेका छन्। उनीहरुले इमेल गरेर फोन गरेर 'आइ स्यालुट योर डिसिजन' भनेका छन्। म वीपीको स्कुलिङमा हुर्किएको व्यक्ति हुँ। म क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी खोल्दिन, क्षेत्रीय पार्टीमा लाग्दिन, राष्ट्रिय राजनीति नै गर्छु। मैले नेताहरुसँग भनेको छु, उदाहरण दिएको छु, म घर छोडेर सुटकेस र विच्छ्याउना बोकेर डेरा खोज्ने मान्छे हैन।
तपाई मानिसक डिट्याच्मेन्ट सुरु भयो भन्नुहुन्छ, तर राजिनामा त स्वीकृत भएको छैन नि?
यो पनि डिभोर्स जस्तै हो। श्रीमान श्रीमतीको डिभोर्स कागजमा साइन नहुँदै सम्बन्ध टाढिइसकेको हुन्छ। मेरो मानसिक डिच्याचमेन्टको प्रोसेस अघि बढिसकेकाले राजिनामा स्वीकृत हुनु वा नहुनुको कुनै अर्थ छैन।
अब त्यो डिट्याचमेन्टबाट फिर्ता गर्ने उपाय छ कि छैन?
नेताहरुको काम गर्ने शैलीमा भर पर्छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा फर्कन गाह्रो छ। उहाँहरुको कार्यशैलीमा तात्विक फरक छैन।
पार्टी छाडेपछि त सांसद पन पनि रहँदैन नि?
म कांग्रेस छोडेपनि म तत्काल संसद छोड्ने पक्षमा छैन। साथीहरुको सल्लाह पनि यस्तै छ। संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले संसदमा बस्छु। मैले संसदीय कार्यसमितिको चुनावमा भाग लिइन। तर नेताको चुनावमा भाग लिए किनभने त्यो महत्वपूर्ण थियो।
संसदमा बस्दा कांग्रेसको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। म कांग्रेसकै संसद् भएकाले मलाई कांग्रेसकै ह्वीप लाग्छ।
तपाईको राजिनामा स्वीकृत भएका दिन त सांसद पद पनि जान्छ नि?
जान्छ। नजाँदासम्म काम गर्ने त्यसपछि अर्को चुनाव आउँछ त्यसबेला कुनै पार्टीबाट चुनाव लडौंला।
अनि तपाइँलाई नहटाउन राजिनामा पत्रमा हस्ताक्षर नगरे भयो, डराउनुपरेन हैन?
हेर्नुस्, मैले घुर्क्याएको हैन। मलाई एकदमै सस्तो रुपमा पनि नहेरियोस्। मसँग डराउनुपर्ने पनि छैन। म धेरै कुरामा गहन छलफल गरेपछि नेपालमा नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण होस् भनेर राजिनामा दिएको हुँ।
मैले नेताहरुको ल्याकत मूल्यांकन गरेको छु। अबको १५ वर्षपछि पनि नेपालको हालत सुधार हुनेवाला छैन। एसियाका अति कम विकसित पाँच/छ राष्ट्रमध्येमा नेपाल पर्छ र त्यसको एक नम्बरमा नेपाल नै हन्छ। किनभने यी नेताको ल्याकत क्षमता र कार्यशैली मैले बुझेको छु।
कांग्रेसमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु माथिल्लो तहमा पुगेपछि पार्टी छाड्ने र क्षेत्रीय पार्टी खोल्ने गरेको देखिन्छ। किन मधेसी नेताहरु कांग्रेसका टिक्न सक्दैनन्?
किनभने चुनाव आएपछि कांग्रेसले हामीलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्छन्। हाम्रो भूमिकालाई पनि गन्दैनन्। कहिल्यै पनि महत्वपूर्ण भूमिका हामीलाई दिँदैनन्। हाम्रो सम्मान पनि गर्दैनन्।
तपाईझैं सम्मान नपुगेर कांग्रेस छोड्ने धेरै नेता छन्। तर मधेसमा अझै कांग्रेस नै ठुलो पार्टी छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी छोड्नुको के औचित्य देखियो र?
त्यसो भयो भने त हाम्रो औचित्य समाप्त भएको हुन्छ। अहिलेसम्म छोडेकाहरुले आफ्नो नेतृत्वको क्षमता देखाउन सकेनन्। यदि हामीले छोडेर पनि कांग्रेसलाई जनताले पत्याए भने त हामीले कांग्रेसलाई स्यालुट गर्नुपर्छ।
संविधान निर्माण हुने बेला तपाई संविधानमा हस्ताक्षर गर्न नजाने भन्नुभयो, पछि जानुभयो। अहिले पनि कांग्रेस छाडेपछि संसदीय दलको नेता चुन्न जानुभयो। यसले त तपाईं आफ्नो निर्णयमा अडिएको देखिएन नि?
यी परिस्थितिजन्य कुरा हुन्। सुरुमा आफ्नो स्ट्याण्ड राखेपनि, पार्टीमा बसेपछि त्यसलाई मान्नुपर्छ। म अहिलेसम्म पार्टीभित्रको सिस्टमिक अपोजिसनमा रहेपनि बहुमतलाई त मान्नुपर्‍यो।
तपाई बाह्य शक्तिकेन्द्रको निर्देशनमा पार्टी छोड्न लाग्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि?
म चार पटक प्रत्यक्ष चुनाव जितेर सांसद भएको छु। पटक पटक मन्त्री भएको छु। मेरो छोरा डाक्टर छ। म एनजीओहरुमा कन्सल्ट्याण्ट भएर काम गर्छु, पैसा कमाउँछु। तैपनि म भाडाको घरमा बसेको छु।
यहाँ एक पटक सहायक मन्त्री भएकाहरुलाई हेर्नुस्, उनीहरुका करौडौका घर छन्। म नेशनालिस्ट हुँ, म देशभक्त हुँ। मैले टोपी लगाएको देखेर मधेसका धेरै भूमिगत समूहको धम्की खेप्नुपरेको छ। म देशभक्त नेपाली हुँ। म आफ्नै विवेकले काम गर्ने मान्छे हुँ।
यदि सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ?
म बन्दिन। अहिलेका लागि यतिकै ठीक छु। म मन्त्री भइसकेकाले त्यता पनि मेरो आकर्षण छैन। तर म (कांग्रेसमा) रहेसम्म उहाँलाई सहयोग गर्छु। नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि गतिविधिमा भाग लिन्न तर कांग्रेसको नेतृत्वलाई सहयोग गर्छु। पार्लियामेन्टमा सहयोग गर्छु।पर्साबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सुरेन्द्र चौधरी पूर्वमन्त्री, नेपाली कांग्रेस पर्साका पूर्व सभापति, पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन्। वौद्धिक र इमान्दार छवि बनाएका चौधरीले कांग्रेस महाधिवेशनअघि पार्टीबाट राजिनामा दिएपछि चर्चामा छन्। पार्टीमा राजिनामा दिएपनि उनी कांग्रेस संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा सहभागी भए।
चार पटक सांसद निर्वाचित भएका र पटक पटक मन्त्री भइसकेका चौधरी अहिलेको राजनीतिक दलहरुबाट मुलुकको विकास हुन नसक्ने भन्दै वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनले गरेका निर्णय, आगामी योजना र उनीमाथि लागेका आरोपहरुका विषयमा पहिलोपोस्टका विनोद ढकाल र रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानी :
म गिरिजाबाबुको पालामा तीनपटक मन्त्री भएँ। उहाँले मलाई अहम जिम्मेवारी पनि दिनुभयो, किनभने उहाँले मलाई चिन्नुभएको थियो। किसुनजीले पनि मलाई माया गर्नुभयो। तर अहिलेका नेताहरुले चिनेनन्। एउटै नेतालाई मात्र विश्वास गरे। तीस वर्षसम्म एउटै अर्थमन्त्री, यस्तो पनि डेमोक्रेसी हुन्छ? नेहरुजस्तो व्यक्तिले ६ पटक अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्नुभयो। तर हाम्रोमा एउटै मान्छेलाई ३० वर्षसम्म अर्थ मन्त्री बनाइयो। अर्थ मन्त्रालय रामशरणको, गृहमन्त्री खुमबहादुरको, परराष्ट्र चक्र बाँस्तोलाको ठेक्काजस्तो भयो
म बन्दिन। अहिलेका लागि यतिकै ठीक छु। म मन्त्री भइसकेकाले त्यता पनि मेरो आकर्षण छैन। तर म (कांग्रेसमा) रहेसम्म उहाँलाई सहयोग गर्छु। नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि गतिविधिमा भाग लिन्न तर कांग्रेसको नेतृत्वलाई सहयोग गर्छु। पार्लियामेन्टमा सहयोग गर्छु।	Read 484 times	Tweet
« मधेशमा दुई प्रदेश उपयुक्त, जनताको भावना बुझेर सीमाङ्कन गर्नुपर्छ : सीतादेवी	पर्साको विकासमा स्थानियको साझेदारी हुन सकेन,विश्वप्रकाश अर्याल स्थानीय विकास अधिकारी, पर्सा »